अमेरिका-इरान तनाव उत्कर्षमा :: तेस्रो विश्व युद्ध रोक्न अपील !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/अमेरिका-इरान तनाव उत्कर्षमा :: तेस्रो विश्व युद्ध रोक्न अपील !!
अमेरिका-इरान तनाव उत्कर्षमा :: तेस्रो विश्व युद्ध रोक्न अपील !!
एजेन्सी । इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको हत्यापछि अमेरिका र इरानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। इरानले हत्याको बदलामा इराकस्थित अमेरिकी २ सैन्य अखडामा आक्रमण गरेपछि स्थिती झनै डरलाग्दो दिशा तर्फ अघि बढेको छ।
इरान र अमेरिका बीचको टकरावलाई लिएर मानिसहरुले तेस्रो विश्व युद्ध सुरु भएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सर्वसाधारण तथा सैनिकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिन जिम्मेवार बन्न विश्व राजनेताहरुलाई मानिसहरुले आग्रह गरेका छन्।
दैनिक अनलाइन |
ज्योतिष शा`स्त्र भन्छ बिहान यस्तो सपना देख्नु भयो भने सुखै-सु`ख मिल्ने !!!
अस्पतालमा कोरोनाले छटपटी भैरहेका बिरामीको दर्द`नाक अवस्था दे`ख्न नसकेर अमेरिकाकी डाक्टरले गरिन देह`त्याग
कोरोनाका कारण लन्डनमा बाबु`छोरी सुधिर र पुजाको नि`धन, मला`मी जाने कोही भएनन् !!